Baladweyne Oo Laga Cabsi Qabo Fatahaad Ku Soo Wajahan – Al-Hurriyah
Shacabka magaalada Belad-weyne ee Gobolka Hiiraan ayay cabsi la soo deristay maalmihi ugu danbeeyay maadaama la gudagalay xiliga gu,ga oo roobab badan ay da,een, walalka ugu weeyn waxa uu yahay fatahaad la mid ah tii sanadkii hore in uu sameeyo webiga Shabelle ee magaaladaas dhexmara.
Biyaha webiga ayaa sare u kacay maalmihii la soo dhaafay, iyadoo Maamulka gobolka Hiiraan uu bilaabay caro tuur lagu sameynayo hareeraha Wabiga iyo goobaha ay Biyuhu ka soo baxaan.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa kormeeray goobaha qaar ee Wabiga, isagoo uga digay shacabka biyo farabadan oo ku soo wahahan Magaalada Beledweyne.
Sanad walba ayaa Wabiga Shabeelle ee mara Gobolada labada Shabeelle iyo Hiiraan waxaa uu sameeyaa fahataado sababa inay dad badan barakacaan.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Janaraal; Cabdi Xasan Maxamed “Xijaar” ayaa Xafiiskiisa…
Allaha u naxariistee waxaa Magaalada Muqdisho ku geeriyooday Xildhibaan, Aadan Cali Xasan (Jamhuuriya) oo ka tirsanaa mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanka oo Maalmihii u dambeeyay ku xanuunsanaa Isbitaalka Yardimeli…
Nuur Xasan Xuseen, Nuur –Cadde, wuxuu ahaa nin muddo ka badan nus qarni u shaqeeyay Dowladda Soomaaliya, jagooyinka dalka ugu sarreeyana ka gaaray. Wuxuu muddo dheer ka tirsanaa booliiska Soomaaliya. Wuxuu ka qabtay xilal kala duwan. Darajo wuxuu ka gaaray Gaashaanle…